कम्युनिष्ट सरकार विरुद्ध विराटनगर आन्दोलित, के हो कारण ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/कम्युनिष्ट सरकार विरुद्ध विराटनगर आन्दोलित, के हो कारण ?
विराटनगर–विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्न तयार पारिएको डीपीआर संघीय सरकारले अस्वीकृत गरेपछि प्रदेश नं १ का पर्यटन व्यवसायी अन्दोलित भएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी र पर्यटन व्यवसायीले डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश सरकारले समेत यस विमानस्थलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर डीपीआर नै अस्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारसमेत आश्चर्यचकित भएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसले गर्यो भयंकर तयारी, नेकपालाई आपत !
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकेपछि दलहरू चुनावी तयारीमा लागेका छन् । प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा रिक्त भएका ५० सिटका लागि मंसिर १४ मा निर्वाचन हुँदैछ । कतिपय साना दल चुनावी तालमेल गर्न छलफलमा जुटिसकेका छन् भने केही दलले बहिष्कारको निर्णय पनि गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपामा उपनिर्वाचनको विषयले छलफलमा प्रवेश पाएको छैन । नेकपा केन्द्रीय विभाग, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र जनवर्गीय संगठनको इन्चार्जलगायत काममा अल्झिएको छ । उपनिर्वाचनकै विषयलाई लिएर पार्टीमा कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
विपक्षी दल कांग्रेसले भने जिल्ला–जिल्लामा पार्टीका नेतालाई सक्रिय बनाइसकेको छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले उपनिर्वाचन तयारीका लागि जिल्ला–जिल्लामा पार्टीका नेता लागि सकेको बताए । छिट्टै केन्द्रबाट प्रनितिधि पठाएर निर्र्वाचन माहोललाई तीव्रता दिइने महतको भनाइ छ ।
जेलबाट छुटेलगत्तै अर्जुन क्षेत्रीले खोले यस्तो रहस्य